माग्ने बुढा बाम गठबन्धनलाई भोट माग्दै ! « Ramailo छ
माग्ने बुढा बाम गठबन्धनलाई भोट माग्दै !
समय : 9:06 am
देश यतिबेला चुनावी माहोलमा छ । नेता तथा कार्यकर्तालाई चुनाव प्रचार गर्न भ्याईनभ्याई छ । नेतासँगै कलाकारलाई पनि चुनाव प्रचारमा व्यस्त छन् । आफ्नो पार्टीलाई जिताउन उनीहरु रातदिन लागि परेका छन् । केही कलाकारहरु भने मौन छन् ।
यस्तै राजनीतिक दलप्रति मौन रहेका कलाकार केदार घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढा बाम गठबन्धको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । आईतबार चितवनको माडीमा बाम गठबन्धनले गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर माग्नेले प्रहसनसँगै सच्चा नेतालाई भोट दिन जनलाई आग्रह गरे । यति भन्दा भन्दै उनले आफु राष्ट्रिय कलाकार भएको भन्न भने छुटाएनन् । ‘म यहाँ कुनै पार्टी प्रवेशमा आको होइन् । तर,घरमा दुईटा दाजुभाई झगडा गरिहंदा गम्भिर अवस्था आयो भने एउटा पक्ष लिनै पर्छ’ केरदारले भनेका छन्। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि कलाकार घिमिरे लोकतान्त्रिकको विपक्षमा र बाम गठ बन्धनको पक्षमा छन् । भिडियो हेर्नुस् :
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओली प्रमुख अतिथि रहेको माडीको कार्यक्रममा केदारसँगै निर्देशक दिनेश डिसी, हाँस्यव्याङग्य कलाकार मनोज गजुरेल, संगीतकार चेतन सापकोटा, गायक विष्णु खत्री, कलाकार सुरविर पण्डित लगायत उपस्थित थिए ।